गुल्मीमा ५० हजार राशीको फुटवल प्रतियोगिता सुरु ! – ebaglung.com
गुल्मीमा ५० हजार राशीको फुटवल प्रतियोगिता सुरु !
२०७५ आश्विन ३, बुधबार १८:४५	Top News, थप समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७५ असोज ३ । आज देखि गुल्मीमा जिल्ला मै दोश्रो ठुलो धनराशी भएको फुटवल प्रतियोगिता सुरु भएको छ । सदरमुकाम तम्घासको चिदीचौर खेल मैदानमा तम्घास कै अन टेष्ट युवा क्लव रेसुङ्गा प्रथम पुरस्कार ५० को खुल्ला पुरुष फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना गरेको हो । भदौ ६ गते सम्म चल्ने प्रतियोगिताको गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौड्यालले उद्घाटन गरेका थिए ।
कार्यक्रमा राजनैतिक दलका प्रतिनिधी, तिन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख , जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष कृष्ण भण्डारी लगायते मनतव्य राखेका थिए । तिद्धिय पुरस्कार ३० हजार, तृतिय पुरस्कार १० हजार र सान्त्वना पुरस्कार पाचँ हजार राखिएको छ । भने विभिन्न विधामा उत्कृष्ठ हुने खेलाडीहरुलाई ३० हजार बराबरको पुरस्कार प्रदान गरिने क्लवका कोषाध्यक्ष दिनेश पाण्डेयले जानकारी दिए ।
पुर्व तयारीका क्रममा चिदिचौरको सरसफाई गर्नुका साथै मैदान वरीपरि तारबार पनि गरेको छ । त्यस्तै क्लवकै खर्चमा चिदिचौरको प्याराफिटमा समेत रङ्गरोहन गरिएको क्लवका सचिव दिपक कुँवरले जानकारी दिए ।अन टेष्ट युवा क्लवले २०७१ सालमा इतिहासमै पहिलो पटक जिल्लामा सबैभन्दा धेरै प्रथम पुरस्कार ७० हजार राशिको को प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको थियो ।
सांसद पौडेलव्दारा तुरतुरे पहिरोको स्थलगत अवलोकन !
ताराखोला गाउँ पालिका अध्यक्ष सुप्रबल जनसेवा पदक बाट सम्मानित